Tanterahana ny M’Foot fokontany ao Antananarivo renivohitra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ibalita il y a 6 mois
Fanomezan-danja ny kitra ny fijerena ny eny ifotony Fampivoarana ny kitra malagasy ary hanomezan-danja ny Kitra any amin’ny fokontany no namoronana ny tetikasa M’foot fokontany. Karakarain’ny fikambanana Alefa Barea izany fifaninana izany. Miisa 72 ireo ekipa handray anjara. Izany hoe 12 isaky ny boriborintany eto Antananarivo. Ankizy 13 hatramin’ny 15 taona avokoa izy ireo.
Tamin’ny fisarihana natao ny sabotsy 2 marsa no namoahana ireo ekipa miisa 12 ireo. Ny 30 marsa hatramin’ny 12 ny volana mey ho avy izao no hanatanterahana ireo lalao. Hotontosaina eny anivon’ny kianja fanaovana kitra ho an’olona fito eny anivon’ny boriborintany ny fifanintsanana. Kianja lehibe kosa no handray ny lalao manomboka eo amin’ny dingana manasa-dalana. Ao anatin’ny fifaninanana dia hahazo fanazaran-tena ireo ekipa. Hisitraka toromarika sy hahazo traikefa amin’ireo manam-pahaizana momban’ny baolina kitra eto amintsika ihany koa. Fanambin’ny Alefa Barea rahateo ny fanasongadinana ny talentan’ireo taniketsan’ny taranja baolina kitra eny ifotony. Hanandratana avo ny tontolon’ny kitra Malagasy.
Betsaka ireo mpankafy baolina kitra ary efa ela no nilalao ity taranja ity isika fa izao vao mba hiatrika ny can. Mila fijerena akaiky izany raha tiana ny ho lasa lavitra amin’ity taranja ity. Miara-miasa amin’ny fahitalavitra RTA ny Alefa Barea amin’ny fandefasana sy fampitana ireo lalao rehetra. Hisy ny fandaharana manokana isan’andro manomboka ny 30 marsa hatramin’ny 12 ny volana mey. Ho fintinina anatin’ny fandaharana lehibe isaky ny sabotsy ihany koa ireo lalao rehetra. Tombony lehibe no hoazon’ny ankizy. Ohatra, hisy mpizaha mpilalao avy any ivelany hanatrika an’ireo fifanintsanana. Hijerena ireo mpilalao tena mahay hahafahan’izy ireo miofana any ivelany.
Efa nisy ireo orinasa nanohana izao hetsika izao. Isan’ireny ny AIRTEL. Manentana ireo orinasa ha · m'fa hafa hanohana ny hetsika ny mpiandraikitra ho tombontsoan’ny ankizy sy fampandrosoana ny baolina kitra eto Madagasikara.